कागजात कीर्ते गरी सार्वजनिक जग्गा ग्याँस उद्याेगलार्इ बिक्री
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका–१ मा नक्कली कागजातका आधारमा किर्ते गरेर सार्वजनिक जग्गा उद्योगलाई बिक्री गरेको खुलासा भएको छ ।
सौतेलो भाइले मार्ने धम्की दिन्थे, अन्ततः जिउँदै कसले जलायो समीक्षालाई ?
रुपन्देही । गत असार ९ गते सुतिरहेको अवास्थामा १६ वर्षीया किशोरी समीक्षा ठकुरीमाथि शंकास्पद तरिकाले आगलागी भयो । घाँटीभन्दा तल जलेर गम्भीर घाइते भएकी समीक्षाको असार २० गते उपचारका क्रममा काठमाडौंमा मृत्यु भयो ।
दुर्इ किलो नक्कली सुनसहित ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । दुई किलो नक्कली सुनसहित तीन जना पक्राउ गरेका छन् । नक्कली सुन बिक्री गर्न लागेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
भद्रपुर । झापाका पुराना पत्रकार एवं साहित्यकार गोपीकृष्ण खनालको दुर्घटनामा परी निधन भएको छ ।
अस्पतालमा प्रहरीले गरेकाे बल प्रयाेग निन्दनीय : मानव अधिकार अायाेग
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहाबार जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गरी धरपकडमा उत्रिनु निन्दनीय भएको जनाएको छ ।
गुप्तेश्वर महादेव गुफामा बुढानिलकण्ठको मुर्ति स्थापना
स्वदेशी विदेशी पर्यटकको रोजाइमा रहेको गुप्तेश्वर महादेव गुफा परिसरमा बुढानिलकण्ठ भगवानको मुर्ति निर्माण गरिएको छ ।
मोरङ । विराटनगर महानगरका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीको अग्रसरतामा शुरु भएका कतिपय कार्यक्रमले निक्कै प्रशंसा बटुलेपछि उहाँले फेरी अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
पोखरामा प्रधानमन्त्रीले भनेः नेपाली मिनिरल पानीको व्यपार विश्वभर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको मिनिरल सहितको पानीको व्यपार विश्वभर गर्न सकिने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकलाई बिहीबार
काठमाडौँ महानगरः फोहर व्यवस्थापन नहुँदा चोक र बजार दुर्गन्धित
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शहरका विभिन्न चोक तथा बजार दुर्गन्धित बन्दै गएको र रोगको संक्रमण बढ्ने देखिएकोे छ ।
जुम्लामा गम्भीर घाइते भएका प्रहरीलार्इ काठमाण्डाै ल्याइयाे
बाँके । जुम्लामा बिहीबार डा. गोविन्द केसीका समर्थक र प्रहरीबीच बिहीबार भएको झडपमा परी गम्भीर घाइते प्रहरीलाई थप उपचारका लागि आज काठमाडौँ पठाइएको छ ।